Faraska Mustang, faracii duurjoogta Isbaanishka | Fardaha Noti
Mustangs ama Mustangs waa fardaha duurjoogta ee Woqooyiga Ameerika. Waxaa loo arkaa mid ka mid ah fardaha adduunka ugu quruxda badan iyo mid ka mid ah astaamaha Mareykanka, laakiin ... Ma ogtahay in asalkiisu yahay Isbaanish?
Haddaan ereyga naxwe ahaan u lafagurno "Mustang" waan u kuur galnay taas wuxuu si toos ah uga yimid ereyga Castilian "mustang" oo macnaheeda uu qeexayo Fardaha Mesteño ee duurka ku yaal iyo milkiile la'aan. Fardahaas, Castile ee qarnigii saddex iyo tobnaad, waxaa ku dhacay inay iska leeyihiin cid kasta oo ku guuleysatay inay soo qabato.
Dhamaadka Pleistocene sinnaanta ayaa ka dhammaaday Waqooyiga AmeerikaSi kastaba ha noqotee, inta lagu gudajiray qabsashadii Ameerika, guushii Isbaanishku waxay dib u soo celiyeen xayawaankan quruxda badan. Qaar ka mid ah fardahaas waxay noqdeen maroori (baxsad ama xoolo lumay oo dib ugu laabtay duurjoogta) iyo waxay ku faafayeen qaaradda oo dhan laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Bannaanka ballaaran ee Mareykanka iyo maqnaanshaha ugaarsatada dabiiciga ahi waxay gacan ka geysteen ballaarintiisii ​​degdegga ahayd.
Hadda, waa kuye awowayaashiin? Reer Andalusiyadu waxay si fiican u wadeen Isbaanish, Carab ama Hispano-Carab weligoodba waxay lahaan jireen awoowe ahaan. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah daraasadihii ugu dambeeyay ee DNA, oo ay fuliyeen Jaamacadda Córdoba iyo dhiggeeda Mareykanka, waxay cadeynayaan in Faraska Mustang-ga Mareykanka uu si gaar ah uga yimid Fardo Marsh ee Deegaanka Dabiiciga ah ee Doñana.
Waxaa jira sheeko sheegeysa in Christopher Columbus, oo doonayey inuu adeegsado fardo Hispano-Carab ah markii la qabsaday dunida cusub, waxaa isweydaarsaday qaar ka mid ah fardaha laga kiciyey agagaaraha Seville.
Maanta, Mustang wuxuu halis ugu jiraa inuu baaba'oIn kasta oo walaaca sii kordhaya ee deegaanka iyo makhluuqaadka ku dhex nool, haddana waxay naga dhigeysaa inaan arrintaan ku fiicnaano. Si kastaba ha noqotee, waa run in kasta oo la ilaaliyo oo ay tahay astaan ​​Mareykan ah, haddana tirada faraska ee mustang ayaa sii socota inay hoos u dhacdo. Baahida loo qabo daaqa lo'da waa mid kamid ah sababaha aasaasiga ah ee faracyadan fardihii ay guuleysteen Isbaanishku u sii wadeen, ugana sii ugaarsadaan meelo badan oo ka tirsan Mareykanka.
1 Waa maxay faraska Mustang
2 Taariikhda Soomaaliya
Waa maxay faraska Mustang
Fardaha Mustang ee maanta waa tijaabooyin adag oo adag oo leh dherer u dhexeeya 135 cm iyo 155 cm. Madaxa iyo luqunta sidoo kale waa yar yihiin, oo la jaanqaaday cabirka jidhkiisa. In kasta oo aysan si gaar ah fardu u weyneyn, haddana waxay leeyihiin awood iyo adkaysi noocan oo kale ah oo ay ku ordi karaan masaalooyin aan naftooda daalin.
Waa nooc aad u adag taasi waxay garatay sida loola qabsado dhibaatada loona badbaado bannaanka iyo daaqa, iyadoo la quudinayo dhirta cagaaran iyo kuwa qodax leh iyo iyadoo aan loo baahnayn in biyo badan la cabbo. Waxay cimilo galeen cimilo xumo, laga bilaabo xilliga qaboobaha illaa kuleylka kulul. Mustags ayaa u taagan muruqa weyn iyo la qabsiga in wuxuu u oggolaanayaa iyaga inay ku noolaadaan maahan oo keliya bannaanka weyn laakiin nooc kasta oo aagga Mareykanka ah, oomanaha ilaa buuraha ugu badan.
Muuqaalkoodu badanaa xoogaa waa la dayacay oo waa bahal, wax iyaga siiya qurux gaar ah. Koodhadhku way kala duwanaan karaan, iyagoo hela nooc kasta oo culeys ah iyo xitaa jaantusyo iyo jaakado mootooyin ah. In kastoo, Faraska Mustang, wuxuu soo bandhigi karaa nooc ka mid ah jaakad gaar ah oo gaar ah: isku dar ah bunni leh buluug codad leh oo siinaya dhalaal gaar ah.
Ku dhowaad aan la magacaabin oo aad u caqli badan, jilitaankan sinnaanta leh wuxuu leeyahay dabeecad deg deg ah oo gebi ahaanba madaxbannaan. taasi waxay kaa caawisay inaad ku noolaato duruufaha xun. Waa xayawaan laga shakiyo, wax muhiim u ah naftooda iyo tan lo'da.
Caadi ah in loo tixgeliyo mid ka mid ah fardaha ugu quruxda badan adduunka, sax?
Sidii aan horeyba ugu dhawaaqnay bilowgii maqaalka, Mustangs, fardaha duurjoogta ee Waqooyiga Ameerika oo caan ku ah, kama soo jeedaan dalkan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira diiwaanno isku mid ah oo dad badani ku noolaayeen dhulalka Waqooyiga Ameerika kumanaan sano ka hor, in kastoo aysan hadda lahayn farac la yaqaan. Fardo ka soo bilaabmay Waqooyiga Ameerika, waxay ku dhammaadeen inay dabar go'aan waqti ka hor dhammaadka Pleistocene, taas oo ah, in ka badan 12.000 sano ka hor. Dhowr qarni kadib 1492, guumaystayaashii Isbaanishku waxay yimaadeen Adduunkan Cusub iyagoo fuushan fardoodkooda, fardooleyduna si dhakhso leh ayey dhulkaas ugu soo noqdeen.
Faraskii ugu horreeyay ee loo yaqaanno Mustang horse waxay ahaayeen farac ka mid ah Isbaanishyadan oo sannado ka hor yimid xeebta Florida iyo Mexico. Qaar waxay ka yimaadeen faraska Carabta, qaarna wadada Andalusiya, ama sida daraasadihii ugu dambeeyay ee DNA ay caddeeyeen, Caballo de las Marismas. Fardahaas waxay noqdeen mooryaan, ku faafaya bannaanka iyo seeraha, iyagoo si deg deg ah u kordhiyay dadkooda.
In yar oo kamid ah makhluuqaadkaas ayaa gacanta lagu dhigay Dhaladka Mareykanka, in waxay garanayeen sida loo arko xoogga iyo iska caabinta taas waxay ka dhigtay xayawaankan hab wanaagsan oo gaadiid badanaa laakiin sidoo kale iyaga uga dhigay kuwo ku habboon tiro badan oo hawlo kala duwan ah. Farduhu sidoo kale waxay noqdeen wehel ay aad ugu riyaaqeen oo u yimaadeen inay beddelaan eeyaha sidii xayawaan wehel u ahaa.
Tirada tirada badan ee duurjoogta ah ee soo baxday, waa in lagu daraa fardahaas ay sii daayeen milkiilayaashooda, sida kuwa xoolaha u sii daayay si ay cunto u raadsadaan xilliga qaboobaha mana aha inay hayaan.
Bilowgii qarnigii XNUMXaad, xanaaneeyayaasha Mareykanku waxay tixgeliyeen inay jiraan dad fara badan oo faras duurjoog ah iyo in tan, oo ku kordhisay kordhinta joogtada ah ee lo'da, ay khatar gashay cuntada xoolaha. Sidaa darteed, waxay bilaabeen inay ugaarsadaan. Waxyar in yar ayaa loo yareeyey tirada fardaha Mustang ee Waqooyiga Ameerika ilaa ay u yimaadeen inay ugaadhsadaan si wada-jir ah, taasoo keentay in noocyada ay khatar galaan dhammaadka lixdamaadkii. Waxay ahayd si sax ah todobaatanaadkii marka Golaha Koongareeska Mareykanka, waxaa laga dhaqan geliyey sharci si adag u mamnuucaya ugaarsiga kalluumeysatada oo ku dhawaaqay inay yihiin noocyo la ilaaliyo. Waad ku mahadsan tahay sharcigan, tirada Mustangs waxay joojiyeen in si weyn loo dhimo.
Dhamaadkii qarnigii 30.000, waxaa jiray ku dhowaad XNUMX Fardaha Mustang ee Waqooyiga Ameerika iyo khabiiro ayaa qiyaasey in tiradan ay hoos ugu dhici doonto 10.000. Tani waxay feejignaan gelisay dadkii Mareykanka ahaa ee bilaabay inay abuuraan mashaariic ay ka mid yihiin "Faras korsado" 1973dii Montana, taas oo la isku dayay in laga fogaado ugaarsiga ama allabariga xayawaankan quruxda badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Mustang
WAAN FARDHAHAY FARSAMO INTAAS OO DHAMMAAN MACLUUMAADKAN AYAA SI WACAN IGA CAAWIYEY, QUARANTINE-KAAN AYAAN KA BADBAADI DOONO DHAMMAAN MACLUUMAADKA KU SAABSAN FARSASKA BARBARKAAN. :)